Taariikhda My Butros » Tips for Dating Iyadoo shootali oo Apps kale Mobile
Waxaa jiray waqti marka taariikhda, laba qof oo lahaa inuu la kulmo kasta oo kale in qofka; markaas yimid shukaansiga online; iyo shukaansi hadda online leeyahay laan cusub, waxa uu shukaansi marayo codsiyada mobile.
Lamaanahan ayaa waxay la soo dhaafay of sano goobjoog u bilaabidda dhowr ah oo Chine sida; waxa ugu fiican ee inta badan laga daadiyo waa in ay la soo bixi karaa lacag la'aan ah kharashka.
Iyadoo shootali malaha waa app shukaansi free ugu caansan, waxaa jira dad kale oo badan ee noociisa ah in ay sidoo kale loo isticmaali arrin si baaxad leh; tusaalooyin ka mid ah iskuhaya, OkCupid, Coffee la kulmay Bagel, Badan oo Fish, iyo wixii la mid ah.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin waa in mid la raaco marka la shootali oo Chine kale mobile shukaansi.
Soo qaado sawiro xaq u: Waa in aad soo qaado sawirkaaga si taxadar leh loo eegin app shukaansi aad isticmaalayso ku; sawir wanaagsan waa hab fiican ee dilis dareenka of-hawlgalayaasha shukaansi iman kara. Si kastaba ha ahaatee, isagoo sawirada xaq u noqonayaa mid ka mid muhiim ah haddii aad isticmaalayso shootali, taas oo app sawir ku salaysan.
On shootali, fursadahaaga helidda kulan kaamil ah oo aad ku xidhan tahay inta badan ee aad profile sawiro. A sawirka profile xun joojin laga yaabaa in aad kulan la filayo ka soo bandhigeysa xiisaha badan ee aad ku sugan.
Sida habboon, sawirka ugu horeeya ee profile aad upload on shootali waa inay noqdaan sawir soo jiidasho leh wejigaaga, waa in ay sawir profile labaad muujiyaan Sarajooggaagu iyo mid saddexaad bandhigo karaa qaab nololeedkaaga ama hiwaayad.
Mid ka mid ah wax marna waa in aad samayn, gaar ahaan haddii aad tahay qof dumar ah, waxaa uploading photos naftaada sida kid ah; dhajinta selfies iyo cheesy ninba waxuu-darbo Sidoo kale waa in laga fogaadaa.
Ka taxaddar marka aad qoraal ahaan aad sharaxaad profile: Marka aad si dhab ah shukaansi, aad marna isku daydo in ay u abuuraan aura a dahsoon naftaada ku xeeran.
Maskaxda ku hay in inkastoo aad isticmaalayso app shukaansi ah, goolka ugu dambeeya waxaa la-kulanka dad weji-ka-weji; sidaa, in aysan wax macno been ama naftaada muujinayeen in qof aad aadan.
Haddii wax walba oo adiga kugu saabsan ma wanaagsana, qorato xaqiiqooyinka ugu xiisaha badan adiga kugu saabsan oo iyaga ka mid ah in aad sharaxaad profile. Ha ka waaban inaad tusto off ah la quruxsado ugu xiiso of noloshaada, tusaale ahaan haddii aad leedahay shaqo xiiso leh ama hiwaayad, kala hadal waxa ku saabsan si faahfaahsan.
Waxaad noqon kartaa digtoonaan yar aad sida dadka qaba qayb ka ah ismariyaan had iyo jeer waa kuwo aad caan u.
Had iyo jeer ka jawaabin: Waxaad ka heshay fariin ku shootali (ama wax kale app shukaansi mobile aad isticmaalayso), laakiin qofka diraya fariin uusan u muuqan in uu wax badan aad furato. Xaaladaha noocaas ah, halkii laga fogaado a reply diraya, waa inaad u sheegtaa qofka kale ogahay in aadan xiiseyneyso.
Baro in aad waqtiga farriimo aad: Tilmaamuhu waxay si gaar ah muhiim u ah haweenka; Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaarkood, ragga waa in sidoo kale taxaddar ku saabsan waqtiga ay fariimaha ay soo diraan.
Haddii ay isbuucaan a, Haweenka waa in ay iska bilaabaya batay texting ka dib 10 p.m., ay u samayn karaa oo kaliya haddii ay raadineyso inay ku xidhaysaa mafaatiix.
Rajo talooyinkan caawiyo in aad si aad u hesho kulan kaamil ah oo ku saabsan shootali ama app kasta shukaansi mobile kale in hawlgalada hadda. Kaliya u hubso aadan degdegin waxyaabo aad u badan; maanka ku hayo maahmaahda caanka ah: “gaabis ah oo joogto ah oo ku guuleystay tartanka”.